FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi Isi-Itali IsiArmenia IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiDanish IsiEwe IsiGeorgia IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiPolish IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTsonga IsiTswana IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
AmaNgqina kaYehova ayi-16 * aseTaganrog arhuqelw’ ezinkundleni kuba nje ehlanganisana ukuze azinqulele ngoxolo. Eli tyala liyazibalula kuba alizange lakho elifana nalo eRashiya kutshanje. * Ukuba afunyaniswe enetyala, anokuhlawuliswa imali engange-R 100 000 okanye aphoswe ngapha kwezitshixo kangangeminyaka esibhozo. La maNgqina ayi-16 ayalelwe ukuba angasishiyi isixeko saseTaganrog de inkundla iwise isigwebo.
Le mpatho imbi kangaka iqale ngoJuni 2008 xa uMtshutshisi Wengingqi YaseRostov wafaka isicelo sokuba inkonzo yamaNgqina kaYehova ivalwe eRashiya. Waphinda wathi uncwadi olupapashwa ngamaNgqina kaYehova lunenkcazelo eyingozi. Inkundla ibichophele eli tyala yasivuma esi sicelo somtshutshisi saza kamva saxhaswa nayiNkundla Ephakamileyo YaseRashiya ngoDisemba 8, 2009.
Emva kwesigwebo seNkundla Ephakamileyo abasemagunyeni bathimba iiHolo ZoBukumkani (izakhiwo zokunqula) zamaNgqina kaYehova eTaganrog, kwanyanzeleka ukuba angenele emakhayeni abantu. Le nkundla yaphinda yayalela ukuba iincwadi eziyi-34 zigqalwe njengezinenkcazelo eyingozi. AmaNgqina kaYehova awavumelani nesi sigwebo kangangokuba abhenele kwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu.
Ngenxa yezi zehlo zibuhlungu, abasemagunyeni baseTaganrog baye bavulekelwa likroba lokuba bawaxhaphaze baze bawaphathe kakubi amaNgqina kaYehova. Ngo-2011, amapolisa ambonzeleka ngentseni emakhayeni ayi-19 amaNgqina, avusa abantu abolupheleyo nabantwana yaye agqogqa amakhaya awo kangangeeyure ezisibhozo ukuya kutsho kweziyi-11 ekhangela uncwadi abathi lunenkcazelo eyingozi. La mapolisa athatha kwancwadi yonqulo eyayikho kunye nezinye izinto zekhaya. Abasemagunyeni barekhoda iintlanganiso zonqulo emfihlekweni, ngelinge lokufumana ubungqina obuza kusetyenziswa enkundleni. Ezi ziganeko zaphumela ekubeni urhulumente akhuph’ epokothweni exhasa amaphulo okuxhaphaza amaNgqina kaYehova kulo lonke elaseRashiya. *
AmaNgqina kaYehova afumaneka ehlabathini lonke. Umgaqo-siseko waseRashiya neBhunga LaseYurophu Lamalungelo Abantu liqinisekisa inkululeko yonqulo. IiNkundla Eziphakamileyo zamazwe ngamazwe nazo zilala ngengub’ enye namaNgqina kaYehova ngeli lungelo lawo. Sekunjalo, urhulumente waseTaganrog wenza izinto ngokungathi amaNgqina awamele alifumane eli lungelo.
Eli tyala lisaqhuba, isigwebo silindeleke ngoMeyi emva kokuba kuviwe iingxoxo zokugqibela. Ukuvalelwa kwala maNgqina ayi-16 kuya kuthetha ukuba inkululeko yamaNgqina kaYehova angaphezu kwayi-800 aseTaganrog isesichengeni. Eso sigwebo sinokuphinda sisetyenziswe njengomthetho oza kunyanzela ukuba kugwetywe amaNgqina akwezinye iindawo eRashiya.
Isithethi samaNgqina kaYehova aseRashiya, uGrigory Martynov, uthi: “Le ndlela aphatheke ngayo amaNgqina ayithetheleleki. Awayongozi kukhuseleko lwelizwe laseRashiya. Esona sizathu esibangela impatho elolu hlobo kukuba nje ingamaNgqina kaYehova.”
^ isiqe. 2 Kulo mfanekiso ungasentla, kuvezwe amaNgqina ayi-10 kulawo ayi-16.
^ isiqe. 2 Ngo-2012, abasemagunyeni baseRashiya baye bawatyabeka ngezityholo la maNgqina ayi-16. Ngokomthetho waseRashiya anokuvalelwa ixesha elingangeminyaka emithathu. Kukho nabadala abane abajongene nesigwebo esinokuba ngangeminyaka emihlanu ukuya kwesibhozo.
^ isiqe. 5 Ukususela kwisigwebo seNkundla Ephakamileyo YaseRashiya ngoDisemba 8, 2009, amapolisa elo aye avalela amaNgqina angaphezu kwayi-1 600, ayekisa iincwadi zawo ezingaphezu kweziyi-70 esithi zinenkcazelo eyingozi, agqogqa amakhaya neeHolo ezingaphezu kweziyi-171 aze aphazamisa iintlanganiso zenkonzo eziyi-69.